Ukungenelela Ngaba ukudibanisa zonke izinto
Ubukho obuphakathi kwezinto zonke
Ukunyamezela lixesha eliqulunqwe nguTchch Nhat Hanh elibambene nabaninzi bamaBuddha aseNtshona. Kodwa kuthetha ukuthini? Ngaba "ukuthetha" kuthetha imfundiso entsha eBuddha?
Ukuze uphendule umbuzo wokugqibela wokuqala - hayi, ukunyamezela akuyona imfundiso entsha yobuBuddha. Kodwa yindlela efanelekileyo yokuthetha ngeemfundiso ezindala kakhulu.
Igama lesiNgesi elithintelayo lilingana ne-Vietnamese tiep hien . Thich Nhat Hanh wabhala kwincwadi yakhe ethi Interbeing: Izikhokelo ezine zeBuddhism (i-Parallax Press, 1987) ebizwa ngokuba yi- Paradlax Press (1987) echaza "ukuthintana" kunye "nokuqhubeka." I-Hien ithetha "ukuqonda" kunye "nokwenza apha kwaye ngoku." Ngokufutshane kakhulu, i- tiep ithetha ukuthintana neyona nyaniso yehlabathi ngelixa iqhubeka nendlela kaBuddha yokukhanyiselwa .
I-Hien ithetha ukuqonda iimfundiso zikaBuddha kwaye zibonakalise kwihlabathi-apha kunye neli xesha.
Njengemfundiso , ukuxhamla imfundiso kaBuddha ye-Dependent Origination, ngokukodwa kwimbono ye- Mahayana Buddhist .
Zonke iziganeko ziyaxhomekeka. Le yimfundiso ebalulekileyo yamaBuddha ebizwa ngokuba yi- pratitya-samutpada , okanye i- Dependent Origination , kwaye le mfundiso ifunyanwa kuzo zonke izikolo zeBuddhism. Njengoko kubhalwe kwiSutta-pitaka , uBuddha wembali wafundisa le mfundiso kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo.
Eyona nto imiselweyo, le mfundiso isifundisa ukuba akukho nhlobo inokuzimela. Enoba yiyiphi na , iya kuba khona ngenxa yeemeko kunye neemeko ezidalwe ezinye iziganeko. Xa izimo kunye neemeko zingasayikuxhasa ukuba ubukho, ngoko loo nto iyayeka ukuba khona. UBuddha wathi,
Xa kunjalo, oko kukuthi.
Ukusuka koku kuvela kwesi siza kuvela kuloo nto.
Xa oku akunjalo, oko akunjalo.
Ukususela ekupheleni koku oku kuvela ekupheleni kwaloo nto.
(Ukusuka kwi-Assutava Sutta, iSamyutta Nikaya 12.2, i-Thanissaro Bhikkhu.)
Le mfundiso isebenza kwingqondo nangokwengqondo kunye nezinto ezibonakalayo kunye nezidalwa. Kwiimfundiso zakhe kwiZiqulatho ezilishumi elinesibini zeMveli , u Buddha wachaza indlela ikhonkco elingaxakaliyo lemiba, ngasinye kuxhomekeke ekugqibeleni kwaye sinika ithuba elilandelayo, lisenza sivalelwe kumjikelezo we- samsara .
Ingongoma kukuba bonke ubukho buyingxaki enkulu yezinto kunye neemeko, ziguquka rhoqo, kwaye yonke into iyadibanisa nayo yonke into. Zonke iziganeko zikhoyo phakathi.
Thich Nhat Hanh wachaza oku ngomfanekiso othiwa amaMnyama kwiPhepha ngalinye.
"Ukuba ungumlobi, uza kubona ngokucacileyo ukuba kukho ifu ejikelezayo kweli phepha." Ngaphandle kwefu, akuyi kuba nemvula; ngaphandle kwemvula, imithi ayikwazi ukukhula: kwaye ngaphandle kwemithi, asikwazi ukwenza iphepha. Ilifu liyimfuneko ukuba iphepha libe khona.Ukuba ifu alikho apha, iphepha lephepha alikwazi ukuba khona apha. Ngoko sinokuthi ifu kunye nephepha eliphakathi. "
Mahayana kunye neMadhyamika
UMadhyamika yifilosofi enye yeziseko ze-Mahayana Buddhism. I-Madhyamika ithetha "indlela ephakathi," kwaye ihlola ubunjani bokuba khona.
UMadhyamika usitshela ukuba akukho nto inomntu ongeyena mntu, ongunaphakade. Kunoko, zonke iziganeko-eziquka izidalwa, kubandakanywa nabantu-zithuba zesikhashana zeemeko ezithatha ubunjani njengezinto ezivela kubunye babo kunye nezinye izinto.
Cinga ngetafile yokhuni. Yibandla leenxalenye. Ukuba siyichitha ngokukhawuleza, ngaluphi na umva ukuyeka ukuba itafile? Ukuba ucinga ngako, lo mbono uqobo.
Umntu omnye unokucinga ukuba akukho tafile xa engasetyenziswanga njengetafile; omnye unokubheka kwi-stack yeengxenye zokhuni kunye neprojekthi yetafile-ubunikazi kubo - yithebula edibeneyo.
Ingongoma kukuba inxalenye yeengxenye ayikho itafile yangaphakathi-imvelo; yitheyibhile kuba yinto esiyicinga ngayo. "Itheyibhile" isentloko zethu. Kwaye ezinye iintlobo zinokubona iindibano zeengxenye njengokutya okanye indawo yokukhusela okanye into yokubheka.
"Indlela ephakathi" yeMadhyamika yindlela ephakathi phakathi kokuqinisekiswa kunye nokunyaniseka. Umsunguli waseMadhyamika, iNjjjjuna (malunga nekhulu lesi-2 CE), wathi akulungile ukuthetha ukuba iziganeko zikhona, kwaye akuchanekanga ukutsho ukuba iziganeko azikho. Okanye, akukho nto yinyani okanye ayikho-eyiyo; ulwalamano kuphela.
Olunye uphuhliso lwamaMahayana lumelelwe kwiAvatamsaka okanye kwi-Flower Garland Sutra.
I-Flower Garland iqoqo le-sutras elincinci eligxininisa ukufakwa kwezinto zonke. Oko kukuthi, zonke izinto kunye nezidalwa azibonisi nje kuphela ezinye izinto kunye nezidalwa kodwa zikhona zonke ezikhoyo. Faka enye indlela, asikho njengezinto ezicacileyo; kunoko, njengoVen. Uthi Thich Nhat Hanh uthi, si- inter-are .
Encwadini yakhe ethi Miracle of Mindfulness (Press Beacon, 1975), u-Thich Nhat Hanh wabhala ukuba ngenxa yokuba abantu banqunyaniseka ukunyaniseka kwamacandelo, abakwazi ukubona ukuxhomekeka kwazo zonke iziganeko. Ngamanye amagama, ngenxa yokuba sicinga "inyaniso" njengezinto ezininzi ezicacileyo, asiyiqwalasela indlela abadibanisa ngayo.
Kodwa xa siqonda ukuxhamla, sibona ukuba akukho kuphela into edibeneyo; siyabona ukuba yonke into enye kunye enye. Thina siyibo, kodwa ngelo xesha sinye sonke.
I-Dukkha: Into ebizwa ngokuba yiBuddha Meant 'Ubomi Ubunzima'
Ngaba UThixo Uthumela I-Call-Wake?
I-Acupressure Treasures: Yong Quan - Gushing / Bubbling Spring
UWilliam Penn kunye 'neNgcwele Yakhe'
I-Ikkyu Sojun: i-Zen Master
IQumrhu leMigangatho yokuBhathaniswa kweNgeniso kwiiKholeji zaseWashington DC
IHindu Onam Legend
Kutheni i-Mormon iCwaninga i-Ancestors yayo?
Uluhlu olutshanje lweeMerika zoLwazi lweeNcwadi
Inkcazo yokulingana kweMichiza
Isikhokelo sokuqala kwiBeethoven
Umzobo kaDizzy Gillespie
USteven Holl, uMyili woMbane, uLwazi, kunye noManzi
Imbali emfutshane yeMorocco
Ukwahlukana kweeTe: Ziziphi na zona kwaye Kutheni ezinye zeMidlalo ziSebenzise
Ngaba Unayo I-Pop Popcorn Ngomakhalekhukhwini?
IiRekhodi zokuLawulwa kweMveli kunye neeNkcukacha
UFrances Ellen Watkins Harper
I-Mesosaurus Iinkcukacha kunye nezibalo